मलाई कति बदनाम गर्न सकेको हो ? - अन्तरवार्ता - साप्ताहिक
पत्रपत्रिकामा जे पायो त्यही छाप्न लगाइदिने, जे पायो त्यही गरिदिने ? म यहाँ मनाङमा आफ्नो सुरमा चुनाव प्रचार गरेर बसिरा’छु, कांग्रेसले १० लाख रुपैयाँ दिएर गाउँमा बाड्न पठाएछ । म स्वतन्त्र लडेको मान्छे, एमालेका केटाहरूले पैसा बाँडिरहेका बेला समातेर पुलिसलाई बुझाइदिएछन् । त्यो मुद्दामा समेत मेरो नाम आयो । कति बदनाम गर्न सकेको हो मलाई ? .